Banyere onye bụbu Minista na-ahụ maka njem nleta na Lesotho
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Lesotho » Banyere onye bụbu Minista na-ahụ maka njem nleta na Lesotho
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lesotho • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Honorable Mamahele Radebe, onye bụbu Mịnịsta njem na Lesotho, nwụrụ na Satọde, Machị 31, 2018, ka ọ rịachara ọrịa ogologo oge.
Thato Mohasoa, onye jere ozi dị ka Onyeisi Odeakwụkwọ maka Mịnịstrị na-ahụ Maka Njem Nleta na Ọdịbendị, n’okpuru Mịnịsta na-asọpụrụ Mamahele Radebe dere ụtụ a n’ikike nke ya.
Anyị tufuru Honorable Mamahele Radebe na Satọde, 31 Machị 2018, ka anyị rịasịrị ọrịa ruo ogologo oge. Anyi anwụọlarị nnụnnụ ọma ya na olu na-agba ume, ma ọ bụrụ na anyị họrọ, ọ ga-anọnyere anyị, na ezi ahụike, n'ụwa nne a.
Na ndụ ya, nnukwu nwa nwa nke Chief Lethole nke Makhoakoa (dịka ọ na-ezo aka na onwe ya), ọ ga-ahụ oke oke ya nke nhụjuanya, mgba, enweghị mgbagwoju anya, enweghị ụmụ nke aka ya, na ọnwụ nke di. ọnwụ. Ma n'ime ọnọdụ ndị a bịara nwee ntụkwasị obi kwụ ọtọ ma nwee ọ thatụ na ndụ ga-eweta ihe ọma. Nke a bụ ọnọdụ nke o si bie ndụ ya nke ụkpụrụ, ọmịiko, ịdị na-aga n'ihu na nnukwu ọganiihu ọkachamara.
Ozugbo ọ lara ezumike nká n'ọrụ ọrụ ọmarịcha obodo, dị ka onye isi ọrụ nzipu ozi nke Lesotho, o sonyere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Lesotho, na-aga mgbago ugwu na mpaghara Hololo, iji guzo na ntuli aka dị ka onye na-azọ maka Mgbakọ All Basotho. (ABC). Oge ya dị ka Mịnịsta nke njem njem nlegharị anya na ọdịbendị bịarutere na 2012, na-esote nguzobe nke gọọmentị mmekọrịta mbụ nke Lesotho. Ọ bụ n'ikike a ka anyị abụọ bịara ịrụ ọrụ ọnụ wee nwee mmekọrịta siri ike n'oge ndụ.
Dika o gosiputara ihe onye ozi kwesiri ibu, o gosikwara anyi ihe mmadu kwesiri ibu. O ji obi ọcha, nlebara anya na obere obiọma, na ọchị ọchị nke kọwapụtara ezigbo ndụ. Mmekọrịta dị n'etiti Onye Minista na Onye Isi Oche adịghị mfe ijikwa. Ndị a bụ mmadụ abụọ, nke ọbụla nyere ikike dị ike. Onye ụkọchukwu nwere ọrụ iji gosipụta ntụzịaka zuru oke na ijikwa ozi, ebe onye isi odeakwụkwọ nwere ikike naanị inye ikike na ntụzi aka niile - mmadụ na isi obodo. O nwere ike, ọ dị ugbu a, ma na-aga n’iru, bụrụ isi mmalite nke ịgba mbọ n’etiti ikike abụọ a. Ọ bụghị ebe maka ndị ike kpuru ìsì. Ọ bụ mmekọrịta nke chọrọ nkwanye ùgwù, ntụkwasị obi, mmekọrịta, na mmekọrịta. Minista anyị nwere àgwà niile a. Ọ kpọtụrụ anyị niile na-arụ ọrụ, site na mụ onwe m dị ka onye ndụmọdụ ukwu ya, na ndị ọrụ niile, dịka ndị ọrụ ibe ya, ma mesoo anyị otu ahụ. Ma ọ kariri ihe ahu kari; ọ bụụrụ onye ndu, onye ndụmọdụ, nne, na enyi. Amụtara m ọtụtụ ihe n'aka ya na usoro ọrụ gọọmentị, yana amụma ọhaneze, gụnyere etu esi agagharị na gọọmentị na-eme mkpọtụ iji nweta ọrụ, karịa n'aka onye ọ bụla mụ na ya rụkọrọ ọrụ.
Gọọmentị Coalition mbụ guzobere "Job Summit," otu ikpo okwu nke gọọmentị ga-eji mee ka ọrụ ọrụ na ịkwalite akụ na ụba. Achọpụtara akụkụ ndị njem dị ka otu ogidi dị mkpa nke ebumnuche amụma a, ma duzie anyị ka anyị jiri ya mee ihe. Na nzaghachi, onye ozi ahụ kụrụ ala na-agba ọsọ site na ịkwado ọtụtụ atụmatụ, bụ nke e mere iji weghachite mpaghara a. Na njedebe, tinyere ihe ndị ọzọ, ọtụtụ ụlọ ọrụ gọọmentị, bụ nke, ka ọ dị ugbu a, sụgharịrị dị ka enyí ọcha, tụbara na ngalaba nkeonwe, site na mmepe ngwa ngwa mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze, na-ebute ụba ego obodo. , mụbara ọrụ nke Basotho, nakwa ịrị elu nke ndị njem na-abata Lesotho.
Onye ozi anyị jiri nkwanye ugwu were nọchite anya obodo anyị wee mekwaa mmekọrịta bara uru na nke ga-abara onye ọ bụla uru na ya. Somefọdụ n'ime anyị enweghị ike ichefu amara ya nke dugara na mbinye aka nke Memorandum of Understanding n'etiti Ozi anyị na South-Africa Provinces nke Kwazulu-Natal na Free-State, na Joint Cooperation na Cableway Project, n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ , tinyere Drakensberg. Na nzuko anyị na ndị ọrụ njem njem-South-Africa, ọ rụrụ ụka na ọbịbịa nke ọrụ a, ebe ọ ga-akwalite njem nleta na ime ka azụmahịa dị n'etiti mba abụọ ahụ, ọ ga-, n'okwu ya, "ga-aga n'ihu ịnweta mmekọrịta anyị, ”Na-ekwu maka ihe ịga nke ọma nke Sehlaba-Thebe National Park, dị ka ebe nketa ụwa - ọrụ kwesịrị ịja mma nke South-Africa na-akwado -, dị ka ihe atụ maka ịnọgide na-emekọrịta ihe.
Ọ gbalịsiri ike iji hụ na a na-anụ olu Lesotho mgbe niile na ntanetị ụwa. Eziokwu na-adịghị mma banyere mmekọrịta mba ụwa bụ na ọ na-adịkarị njọ maka nnukwu steeti. Minista anyị agaghị ada na-anabata nke a dị ka ụkpụrụ. Ọ bụ onye ndu olu maka nhazigharị nke Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Mpaghara nke Southern-Africa (RETOSA), wee lụọ ọgụ n'ụzọ gara nke ọma na-egosi dị ka oligarchy na-edepụta atụmatụ njem nleta nke mpaghara ahụ. O kwusiri ike maka nguzobe nke ụlọ ọrụ n'ime SADC Secretariat nke a ga-arara nye ngalaba Arts na Craft, na-arụ ụka na mpaghara a, dịka akụkụ nke akụ na ụba okike ụwa, ahụla uto na-agbanwe agbanwe wee gosipụta ikike iji mepụta njikọ siri ike karị ya na ndi njem na mpaghara.
O wutere ya na enweghi ezigbo njikwa na nhazi nke gburugburu ebe obibi na Lesotho ma na-atụsi anya ike ụbọchị a ga-elebara okwu a anya ngwa ngwa, dịka gọọmentị kachasị mkpa. N'ikwekọ n'ọhụụ a, ọ mere ka ọ bụrụ ebumnuche ya iji aka ya rịọ arịrịọ Lesotho n'ihu onye isi Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP), iji nyere aka guzobe Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe obibi, otu ga-ebu ọrụ maka ịhụ na njikwa na-adigide nke ihe okike, nchekwaba gburugburu, na iweputa atumatu na omume oma.
Ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ezughị okè, n'ihi na ọ bụ ezie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ịbụ nkewa na nkewa, o mere ka ọ bụrụ omume ya ịgakwuru ndị mmegide, dịka na mgbe ọ dị mkpa ime ya. Ọ ga-achọpụta na ọ gbasaghị mbọ ịbụ enyi Keketso Rants'o, mgbe ahụ nke Lesotho Congress for Democracy (LCD); ịrịọ onye ọrụ LCD ka ọ kwado ya dị ka Minista nke njem nleta mgbe ọ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ maka okwu ahụ ịnọdụ ala na onye nọchiri ya, onye otu Democratic Congress (DC) wee nye ya nduzi dị oke mkpa. Nke a bụ onye na-agaghị eme ihere ime mkpesa n'oge ezumike nzuko omeiwu na ọ na-elele anya "Qoo's antics" na nzuko omeiwu. Ọ dị mkpụmkpụ, ọ bụghị mmụọ ọjọọ.
Onye ozi anyị nwere obiọma ma nwee obi ebere. Enweghị m ike icheta ọnụọgụ ndị ezinụlọ ya na nke obodo ọ na-elekọta; ọ ga-abụ onye ikwu na-arịa ọrịa, ndị nọ ná mkpa nke obodo na-achọ uwe, nri ma ọ bụ ebe obibi, onye otu pati, ụlọ akwụkwọ ime obodo, ma ọ bụ ụka nwere mkpa. Ọ na-achọta ụzọ iji gbochie ha. Mgbe onye ọrụ ya nwụnahụrụ, ọ ga-abụ onye izizi ga-abịarute n’ụlọ ka ọ kasie ya obi, maọbụ ọ bụrụ na ọ nọ n’ebe dị anya, ọ gaghị egbu oge iji ekwentị kpọpụta, ebe ọ na-arịọ mgbaghara maka adịghị n’onwe ya. Mgbe ndị otu Ọbá akwụkwọ anyị mere ka ọ mata atụmatụ ha chọrọ inye “ụlọ ngagharị” n’ thelọ Mkpọrọ Etiti Maseru, maka iji ya mere klas nke ndị mkpọrọ, ọ sheụ juru ya obi wee gwa ha, sị, “Nyekwa ha akwụkwọ na ebe a na-ede akwụkwọ.”
Onye isi anyị nwere nnukwu ọchị ma nwee ikike ịchị ọchị n'olu dara ụda. Mgbe m rutere inyere ya aka idozi ụgwọ ụlọ oriri na nkwari akụ ya na Vienna, Austria, ọ na-akwa m emo na ọ fọrọ nke nta ka m hụ ya ebe ọ na-asacha efere na kichin ụlọ oriri na ọ asụ asụ, na-atụgharị, "Lee, ha na-akwụ gị ụgwọ maka obere akpa shuga." Ruo ọtụtụ oge ọ na-akọ etu esi ewepụ ya na Board of the Bank, mgbe ọ chọpụtasịrị na ọ sonyeere ndị na-emegide ABC. Akụkọ a gbara gburugburu Nzukọ Nzukọ a nke o chefuru itinye ekwentị ya na ịgbachi nkịtị. N'oge a na-eme ihe a, ekwentị ya kụrụ, ma ọ dị nwute na ya, n'ụlọ jupụtara na ndị nkwado LCD, ụda ya bụ abụ otuto ABC, nke dara ụda, na-agba Thabane ume ka o weghara ọchịchị Mosisili! Wentlọ ahụ gbachiri nkịtị ka ọ na-agbatị iji mechie ekwentị ahụ. N’echi ya, ọ natara akwụkwọ ikike ịhapụ ndị ọrụ ya. Mmeghachi omume ya; o were akwụkwọ ozi ahụ, lee ya anya, chịrị ya ọchị rue Hololo ebe ọ ga-edebanye aha ya ka ọ guzoro dịka onye ga-azọ ọchịchị ABC na ntuliaka ahụ na mpaghara ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Anyị na-efu ya nwa oge ugbu a maka ọrịa, na ọnwụ ugbu a, mana mmetụta anwansi ya na ndụ nke ọtụtụ n'ime anyị ga-adịru mgbe ebighi ebi. Mgbe anyị na-enwe mwute maka ịgafe ya, anyị na-enweta ume site na Akwụkwọ Nsọ (Mkpughe 21: 4) na, “… Chineke ga-ehichapụ anya mmiri niile n'anya ha; ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ụfụ agaghị adịkwa ọzọ: n’ihi na ihe mbụ niile agabigawo. ” Nnyin imada mme iko emi nte akpaniko ndien ekop ndongesit ke enye okpong ubiak ye ufok ke ndidu ye ebe esie ke heaven.